Nhau - Proofing ndiyo yakakosha link yekugadzira bhodhoro regirazi
Proofing ndiyo yakakosha link yekugadzira bhodhoro regirazi
Hunhu hwegirazi bhodhoro hunoenderana zvakanyanya nemhando yezvigadzirwa zvekugadzira, zvigadzirwa zvekugadzira uye mold kugadzira. Proofing inhanho yakakosha mukugadzira. Kupupurira kunobata zvakananga mutengo wekugadzira uye mhando yemabhodhoro egirazi, saka inofanirwa kutorwa zvakanyanya.
1. Mutengo wegirazi bhodhoro mold
Kunyange zvazvo vamwe vagadziri vachichaja zviuru zvemadhora nokuda kwezviumbwa zvavo, vanorasikirwa nemari kana dzikasakwana. Chikonzero chikuru imari yekutambisa nguva yekugadzira. Muchokwadi, iyo mold mutengo haidiwe nemugadziri, asi nefekitori yekugadzira kubhadharisa. Kunyanya, mabhodhoro akakosha-akaumbwa, zvigadzirwa zvakawanda zvakagadziridzwa zvakanyanya, kugadzirwa kwemasamples anokwanisa. Kana tekinoroji inoshandiswa yakasiyana, midziyo yakasiyana, nemichina yakasiyana inogona kunetsa kugadzira chigadzirwa chimwe chete.
2. Hunhu hwezvinhu
Kana iyo bhodhoro ichidikanwa kuti ive yemhando yakanaka uye kuti isangane nemhando yegirazi zvinhu, inogadzirwa mufekitori yegirazi inokwanisa kuitira kuti zvimiro zvayo zvemuviri nemakemikari zvisangane nezvinodiwa.
Kana kutaridzika kwakanaka, kujeka kwebhodhoro kwakanaka, uye kupedzisa kwakanaka, shandisa zvinhu zvakachena zvakakwirira.
Chechitatu, nguva yekudzivirira mabhodhoro
Muhupfumi hwemusika, mafekitori makuru emabhodhoro egirazi ari kukwikwidzana, vese vanoda kuwana mamwe maodha uye kuwana purofiti iri nani. Kana iwe uri mutengesi, iwe unoda kuwana mamwe maodha. Vamwe vevagadziri vemabhodhoro egirazi vanotora nguva yakareba kuti vave neruzivo rwakadzama rwekuongorora maodha, asi nguva yekudzokorora inogona kunge yakareba, kazhinji makambani madiki anochinjika. Mushure mokunge tawana muenzaniso, tinonzwa kuti inogona kuitwa uye muenzaniso unogona kugadzirwa mumazuva makumi maviri. Ipapo pane kurongeka kwemuchina proofing, iyo inofungidzirwa kutora mazuva mashanu, ingangoita mwedzi wenguva yekugadzira. Asi ikozvino mativi mazhinji akagadziridzwa anoda 15-20 mazuva kuti atore sampuli, saka vagadziri vanofanirwa kumhanyisa mune zvimwe zvinhu, uye vamwe vanotoita sampuli pamutsetse wekugadzira usingaenderane. Zvigadzirwa zvine zvishoma kuomarara zvinodiwa zvinogamuchirwa zvakare. Kana chiri chigadzirwa chakakosha, kana zvinhu zvemukati uye mold dhizaini isingaenderane, zvakaoma kuburitsa akakodzera samples.